Jamie Carragher Oo Magacaabay Labada Saxiix Ee Ay Liverpool U Baahan Tahay Inay Sameyso Xagaagan Si Ay Ugu Guuleysato Premier League | Laacib.net
Jamie Carragher Oo Magacaabay Labada Saxiix Ee Ay Liverpool U Baahan Tahay Inay Sameyso Xagaagan Si Ay Ugu Guuleysato Premier League
May 18, 2019 Balaleti 3
Jamie Carragher ayaa sheegay inay jiraan labo saxiix oo Liverpool ay u baahan tahay si ay ugu guuleysato Premier League xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxda Reds ayaa haatan joogta finalka Champions League oo ay 1da bisha Juun magaalada Madrid kula ciyaareyso kooxda Tottenham laakiin waxa ay ku hungoobeen xilli ciyaareedkan inay hantaan Premier League oo ay hal dhibic kaga qaaday Manchester City, waxaana y durbaba dareenkooda u weeciyeen suuqa kala iibsiga.
Liverpool ayaa lacag badan ku bixisay soo xerogelinta Alisson, Fabinho, Naby Keita iyo Xherdan Shaqiri xagaagii la soo dhaafay laakiin lama filayo inay saxiixyo saas u tiro badan sameeyaan xagaagan.
Taas bedelkeeda halyeeyga Liverpool Jamie Carragher ayaa dareensan in kooxda ay u baahan tahay tayo halka ay tiro badnaan eegi laheyd, isagoo xusay in soo laabashada Philippe Coutinho aan iyadana meesha laga saari karin.
“Waxay ila tahay inaan u baahanahay daafac garab oo ka ciyaari kara midig iyo bidix” ayuu Carragher u sheegay Liverpool Echo
“Uma maleynayo in xiddig buuxin kara boosaska Trent ama Robertson inuu haatan kooxda joogo. Waxaan boosaskaas marar qaar u isticmaalnay James Milner iyo Jordan Henderson shaqo fiican ayayna qabteen laakiin ma ahan xiddigo daafac garab oo dhab ah.
“Waxaan u baahanahay weeraryahan kale oo ku heer ah seddexda afka hore haatan noo joogta. Uma baahnin weeraryahana dhexe. Dadku waxay leeyihiin waxaan u baahanahay No.9 laakiin ma rumeysni taas.
“Ciyaaryahan la mid ah Mane, malaha ka da’ yar ahna xiddig soo baxaya. Dadku waxay ka hadlayaan xiddigaha garbaha uga dheela Ajax, laakiin wax badan kama aqaano marka laga reebo inaan ku arkay Champions League.
“Laakiin waxaan rabaa weeraryahan ka dheeli kara garbaha bidix iyo midig iyo xitaa dhexda, xiddig dhaqdhaqaaqi kara. Si aan u helo afar xiddig oo u tartameysa seddex boos. Waxaana sii heysanaa Rhian Brewster oo soo baxaya iyo Divock Origi.
“Uma baahnin No.9 sababtoo ah Mane iyo Salah waa ay ka ciyaari karaan booskaas, Firmino ayaase haatan ah dooqa koowaad ee booskaas.”
Waa aragti aan kala mideesanahay deficit hore e liverpool
Aadan carab says:
Kuma raacsani aragtidaa jamei sababtoo ah liverpool kaliya wxy u baahantahay 2xidig
1. Waa centre back lala dheelsiyo vvd tartana la gala gomez, matip iyo lovren because cid vvd lala ciyaarsinkaro ma jogto
2. Attacking mildfeilder ka ciyaari kara weerarka o hal abuur leh oo chance yo bdn abuuri kara waxa kaliya ee kooxda ka maqan waa hal abuurka man city cml coz weerar difaac dhex iyo keeper ba waka dhisanahay
Anigu waxaan odhan lahaa virgil nin ag istaaga hala keeno iyo nin kubad sameeya ah intaas oo kaliya ayay liverpool u baahan tahay laakin aragtida jamie waay fiicantahay